प्रधानमन्त्री देउवाले भाषण गर्दैगर्दा ‘नो एमसीसी’को प्लेकार्ड देखाउने काे हुन् ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रधानमन्त्री देउवाले भाषण गर्दैगर्दा ‘नो एमसीसी’को प्लेकार्ड देखाउने काे हुन् ?
सुनसरी-२० पुसमा धरान स्थापना दिवस कार्यक्रमकाे उद्घाटनमा पुगे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । दिवसका अवसरमा धरान उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा नै दिएकाे थियाे । जब प्रधानमन्त्री देउवा ‘धरान डे’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पब्लिक हाई स्कुलको मञ्चमा उक्लिए ।
मञ्च अगाडि फरक दृश्य देखियो ।एउटा हातमा नेपालको झण्डा अनि अर्को हातमा प्ले कार्ड । झण्डामा लेखिएको थियो- शुम्भ रक्षक नै निशुम्भ भक्षक अनि प्ले कार्डमा ‘गुम्नेछ नेपाल आमा’ शीर्षकको कविता । त्यही कविताको एक लाइनमा थियो ‘नो एमसीसी’ कवितामा लेखिएको थियो –
एमसीसी देशको हितविपरीत रहेको भन्दै उनले देश निर्माणमा लागेका रक्षक नै भक्षक भएको र जनता जाग्नुपर्ने बताए ।एमसीसीको विषय बाहिर आएदेखि करिब डेढ वर्ष अगाडिदेखि उनी झण्डा र कविता लेखिएको प्ले कार्ड लिएर हिँडिरहेका हुन् ।झण्डाको अर्को पट्टी राहु र केतु लेखिएको छ ।
जसको अर्थ चन्द्रमा र सूर्यमा ग्रहण लागि सक्यो भन्दै देशलाई जोगाउनु पर्ने चालिसे बताउँछन् ।तर, उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई देखाउन लागेकाे प्लेकार्ड र झण्डा सुरक्षाकर्मीले खोसेका थिए । उनी यसअघि नेपाल बैंकमा जागिरे थिए ।